Igbe nichite nke onwe onye n'ime ogige | Foto ndị na-acha agba agba maka nbudata
Igbe nichin nke onwe ya na ubi
Igbe nesting ụlọ: otú o si arụ ọrụ!
Ebee ka igbe nesting nke onwe ya ga-ekwusi?
Ị na-ahụkarị ha n'ubi ma ọ bụ oke ohia: nesting igbe maka anụ ụlọ anyị. Ihe ọtụtụ ndị na-ekpochapụ dị ka ihe na-enweghị isi ma ọ bụ ọbụna dị ka ntụrụndụ, ma na-azọpụta ụfọdụ nnụnụ n'oge oyi.
Igbe nest nke onwe onye dị ka ebe mgbaba maka ụbọchị oyi oyi
Ewu onwe onye nesting igbe abụghị naanị ọkụbeds, ma na-eje ozi na oyi dị ka ebe obibi si oyi. Nchekwa Nature Nature Germany na-ahụdị na enweghi nsị anụ ozu maka ụmụ nnụnụ, n'ihi na osisi ndị ochie na nke rere ure na-efu n'ime oké ọhịa anyị, ọbụna oghere ndị dị ndụ dị ụkọ.
Mee igbe nest onwe gi
Ya mere, ọ dị mkpa inye nnụnụ ndị nwere ihe mgbakwasị ụkwụ dị n'ụdị onwe-wuru nesting igbe enye.
Mee igbe na umu gi onwe gi
N'ezie i nwekwara ike otu nesting igbe Ịzụta. Ma, ọ na-eme ka ndị ọzọ mara ma mara mma, nke Nesting box to build with the children themselves, Nke mbụ, ụdị nkwonkwo dị otú ahụ bụ oge bara uru bara uru ọnụ, nke abụọ, ụmụaka na-amụta ọtụtụ ihe gbasara àgwà ụmụ nnụnụ na ihe ha chọrọ.
Ọ bụ nke ahụ nesting igbe Ozugbo e guzobere ma na-enwe ọhụụ nleta ahụ, ụmụaka ahụ nwere nnukwu ihe mmeri na igbe nhicha nke onwe ya. N'oge oyi, na-enwe obi ụtọ, ha nwere ike ịhụ titmice, wrens, na ọtụtụ nnụnụ ndị ọzọ - na ọbụna squirrels - na-ekiri nesting igbe iji dị ka ebe ihi ụra.
Igwe elu oyi dị ichiiche na-azọpụta igbe nhicha nke onwe ya ọbụna ụfọdụ nnụnụ. N'ihi na karịsịa n'oge oyi, mgbe ụmụ anụmanụ na-achọta obere nri, ha na-agba ọtụtụ anụ ahụ. Otu abalị oyi bụ ikpe ọnwụ.
der igbe nhicha nke onwe ya kacha mma nke spruce, fir ma ọ bụ osisi beech, nke kwesịrị ịdị ihe dịka sentimita abụọ n'obosara. Kama nchekwa nke osisi (megide nsị ime mmụọ, wdg.) Ị kwesịrị iji mmanụ ma ọ bụ mmanụ na-ekpo ọkụ na gburugburu ebe obibi, ma ọ bụrụ na ị na-etinye ụmụ anụmanụ egwu.
Gọọmenti na-ahụ maka ọdịdị anụ ahụ na-atụ aro ka ị jiri kposara rụọ ntu, n'ihi na mgbe ahụ, a ga-ehichapụ igbe ahụ ka mma. Dị ezigbo mkpa bụ oghere ventilashọn na ala nke igbe nhicha nke onwe ya.
Dabere n'ụdị nnụnụ nke ga-azụ n'ime igbe ahụ, onye ga-ekpebi ókè ntinye ntinye. Dịka ọmụmaatụ, ihe dịka iri atọ na iri atọ, nchịkọta, nnukwu tit, na nza nwere ike ịfe, mgbe ha dị iri abụọ na ise millimet, naanị ụdị dị iche iche nke titmice nwere ike ime ya.
Nakwa ime ime mkpebi banyere nnụnụ, nke ha igbe nhicha nke onwe ya ikwu. Ọ kachasị mma ịlele ụmụ gị tupu oge eruo nke nnụnụ na mpaghara ha na-adabere na igbe nesting ma dezie nha ya. Isi nke igbe ahụ kwesịrị ịbụ ihe karịrị iri na abụọ na elekere iri na abụọ. O doro anya na, enwere ike ibudata akwụkwọ ntuziaka dị mma na nke doro anya na ịntanetị.
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ maka ịdebe igbe nhicha nke onwe ya, Oghere ntinye ga-ezo aka n'ebe ọwụwa anyanwụ na igbe ahụ kwesiri ijikọta ma ọ dịkarịa ala mita abụọ n'elu ala. Na osisi ị nwere ike igbe nest nke onwe ya dozie ya na obere vidiyo ma ọ bụ mbọ igwe anaghị agba.
Na mgbakwunye, ị ghaghị ijide n'aka na mmiri agaghị abanye n'ime mmiri mgbe mmiri ozuzo zoro: Maka nke a, ka igbe ahụ gbanyekwuo n'ihu, ọ bụrụgodị na ị bụ Einflugloch anaghị adị mma. Jide n'aka na enweghi ike ikpocha igbe ahụ site na martens ma ọ bụ nwamba!
Ebe dị mma na-esote osisi na-agbapụta, na-agba, mgbidi ụlọ na balconies. A na-ehicha igbe mgbe oge mmezu. Naanị wepu efọk ochie na igbe nhicha nke onwe ya abọ ya. Jide n'aka na ị na-eyi uwe ma ghara iburu igbe ahụ n'ime ụlọ gị, enwere ike ibute ọrịa ebe a!
Oge kacha mma, otu igbe nhicha nke onwe ya Ịgbụ elu bụ ọdịda. Mgbe ahụ ị nwere ike ịkpụ na sawn!
Short akụkọ maka ụmụ - njem na ubi
Ihe Ngosiputa Ngwa - Ngosiputa ihe si n'ubi
Composting | ubi
Atụmatụ na-edozi nri - Nke a bụ otú ubi si eto ma na-eto eto
Atụmatụ na-edozi ahụ - Na-agba ubi ahụ ọkụ
Atụmatụ Ugbo - Ogige dị mma